UKUBALULEKA KOKUTSHINTSHWA KWE-ABC EKUZALWENI - ABC
Isenzo Seligi Yezobulungisa
Adam Wonakalisa Yonke Into
I-Down Syndrome, uVavanyo ngaphambi kokuzalwa komntwana, kunye ne-Opera ye-Soap Opera? Ukubaluleka kokuTshintshwa ekuZalweni
Utshintshiwe ngexesha lokuzalwa yi-opera yesepha yolutsha edlala ngoMvulo ebusuku kwi-ABC Family. Kwakhona kunokuba yinto endiyonwabisayo kunye nokumangaliswa, umboniso obalaseleyo kumabonwakude ekujonganeni nemiba yokukhubazeka. Ngamaxesha amathathu anesiqingatha, umboniso uphonononge imiba yokungeva kakuhle. Ngoku, intombi eyayisakuba yintombazana (uLily) yomntakwabo (Toby) wamantombazana atshintshiweyo ekuzalweni (iBay kunye noDaphne) ukhulelwe. Kwindawo yokugqibela yesiqendu esitsha sokuqala ukuwa (kwiiveki ezimbini ezidlulileyo), utyhile ukuba ebexilongwa ngemfuzo kwaye wafumana uvavanyo oluqinisekileyo lwe-Down syndrome.
Ndingutata wenkwenkwe ene-Down syndrome kunye nentatheli yamalungelo okukhubazeka. Uluvo lwe-opera yesepha ejongana nomba apho ndityala imali ngokobuqu kuyo ibinokuthi, phantse kuwo nawuphi na umxholo, indenze ukuba ndoyise kwangaphambili. Kodwa Utshintshiwe ekuzalweni kudala esenza umsebenzi oncomekayo obandakanya inkcubeko yezithulu nemicimbi echaphazela abantu abaziziThulu iminyaka.
Isiseko kukuba i-Bay-mfutshane, iinwele ezimnyama, ezobugcisa- kunye no-Daphne - ubude, ubulungisa, iimbaleki, kunye nabantu abaziziThulu-batshintshiwe xa bezalwa. UBay wakhula enabazali abazizityebi, kwaye uDaphne wakhula nomama noninakhulu waseLatina. UKatie LeClerc, odlala indawo kaDaphne ukulahlekelwa kwindlebe , kwaye ngelixa abanye bebezizithulu ukugxekile ukulahlwa kwakhe , lilonke ulwamkelo luluhle. Isitshixo, kum, kukukhumbula ukuba i-opera yesepha iya kwenza izinto zesepha, kwaye ukuba oko kuthetha ukuba ngamanye amaxesha ubomi benza umdlalo, yile nto siyibhalisela xa sivula umboniso.
Abenzi bemiboniso babesazi ukuba i-Down syndrome, uvavanyo lwangaphambi kokubeleka, kunye nokuqhomfa yayiyeyona micimbi iphambili kuluntu lwabantu abakhubazekileyo kunye noluntu lwaseMelika ngokubanzi. Into ababengenakuyiqikelela kukuba, ngenxa yokuvalwa kokukhupha isisu ngenxa yokufunyaniswa kwesifo se-Down syndrome kwangaphambi kokubeleka. iindaba ezingaphambili .
dan harmon ngumsipha
Andazi ukuba uLily uza kwenza ntoni, kodwa esona siqendu sakutshanje sisebenzise ukukhulelwa ukungena kwimibuzo malunga nobomi bokukhubazeka, isazisi sokukhubazeka (uDaphne ucinga ngonxibelelwano phakathi kwakhe njengowesifazane osisithulu kunye ne-Down syndrome), ukukhupha isisu ,kwayeubunzimaion zokukhulelwa okungacwangciswanga.UDaphne waphantse wahlukana nesoka lakhexa wenza amagqabantshintshi (uzama ukulungisa). ULily, umama okhulelweyo, uthethe ngonxibelelwano olunzulu nomntakwabo (onesifo esingachazwanga) kunye neendlela lUkukhubazeka kunokwahluka kunokuba bekulindelwe, kodwa usatyebile kwaye uzele luvuyo .
Nje ukuba ndivedmalunga nesakhiwo sebali, bendifuna ukwazi ukuba bayilungiselela njani abenzi bemibonisoukuyiphumeza kunyeingaba nabaphi na abantu abane-Down syndrome baya kubandakanyeka ngqo. Ndandisoyika ukuba, njengoko kusenzeka rhoqo kwiTV eqhelekileyo , umboniso uyakuba malunga nokukhubazeka ngaphandle komntu okhubazekileyo. Ndimele ndazi ngcono.
ubuhle kunye nesilo movie wiki
Ndabhalela malunga nesiqwenga somxholo kunye nomdali womboniso kunye nomvelisi olawulayo uLizzy Weiss. Nantsi ingxoxo yethu:
UDavid Perry: Ababhali benze isigqibo sokuba babenakhoNgaba umlinganiswa okhulelweyo ufumana isifo kwi-Down syndrome ngaphambi kokuzalwa?
ULizzy Weiss: Eli libali lebali ebesithetha ngalo ngaphezulu konyaka kodwa asikaze sibenayo indawo ngenxa yokuba sigxile ekuhlaselweni kwekhampasi kwibhetshi yokugqibela yeziqendu.Utshintshiwe ekuzalwenimalunga nokungafani, kunye nokusebenzisa igama abanye abalifumana linempikiswano, ukukhubazeka. Kwaye ke ndiyazi ukuba esi iya kuba sisihloko esihle kuthiukuntywila kubalinganiswa bethu. Ndifuna ukuva ukuba uDaphne - ongevayo - unamandlaJonga umxholo, ngokuchasene nokuthi, Bay, ngubani ovayo. Njengombalisi wamabali, ndiyazithanda izifundo apho abalinganiswa bethu bafumana ukunyaniseka malunga neencoko ezinzima ezingasoloko zicacile kwaye zisenokwenza nokuphikisana kwaye zibe neempendulo ezingalindelekanga. Uza kuvakalelwa njani uJohn, usenator weRiphabhlikhi malunga noku? Kuthekani ngoRegina okanye uKathryn?Tyakhe ngumxholo endingazange ndawubona kumabonwakude ngaphambili kwaye ndandisazi ukuba sithonyelwe ukuba singene ngendlela eyahlukileyo nenganyanzelisiyo.
Perry: Loluphi uphando olwenzileyokwi-prenaUvavanyo lwe-tal kuluntu lwaseMelika?
Mhlophe: Ndenze ukuba wonke umntu okwelo gumbi afundeIsahluko se-Down Syndrome ukusuka Kude Emthini ngu-Andrew Solomon. Ndayifunda le ncwadi ukuqala kwayo ukuphuma ngenxa yesahluko esithetha ngobuthulu kwaye ndafumanisa ukuba yinto efundwayo emangalisayo. Ngokuqinisekileyo ababhali bethu babencedisa ukutsala iitoni zophando kuvavanyo lwemfuza ngaphambi kokubeleka, kwinani leDS [Isifo esisezantsi]ukukhulelwa apho esi sibini sikhetha ukukhupha isisu (nangona ndiyazi ukuba eli linani ekunzima ukuqiniseka ngalo kwaye ke lahluka kakhulu), malunga nobomi babantu abane-Down Syndrome. Ndifunde yonke into endinokuyifumana kwi-intanethi ebhalwe ngabazali babantwana abaneDS kwaye ndithethe ngobude kumzali womntwana oneDown Syndrome owayevule kakhulu kum malunga nohambo lwakhe ukusukela oko walufumanayo (kwi igumbi lokuhambisa), ukuza kuthi ga ngoku, xa umntwana wakhe efikisa. Njengamaxesha onke kuphando, yayiyile ncoko yobuqu endiyifumene njengeyona ikhanyayo kwaye iluncedo ekubhaleni.
Perry: Ngaba baya kubakho nabalinganiswa abane-Down syndrome kumdlalo?
Mhlophe: Ngaphandle kokunika nantoni na, ndingatsho ukuba kwisiqendu sesithathu[idlala ngoMvulo olandelayo, 9/7], Abalinganiswa bethu batyelela isikolo sabantwana abane-Down Syndrome. Ngokuqinisekileyo sisebenzise kuphela abadlali abane-Down Syndrome kulawo malungu kwaye yayiyeyona ntsuku inomdla kwimbali yethu yeminyaka emine.
Perry: Ungandixelela ntoni ngemixholo ofuna ukuyiphonononga njengoko eli bali lidlala?
Mhlophe: Amava onke okubhalwa kwalo mboniso ibiluhambo kum kumxholo wokwahluka. Ukuba uninzi lwabantu abevayo beve ukuba usana luzelwe lusisithulu, bayakubonisa ukudabuka okanye usizi, kuba luyilwe njengelahleko. Eyona nto yayiguqukela kum kwasekuqaleni ekubhaleni umqhubi wenqwelomoya yayiyimbono yokuba uninzi okanye uninzi lwabantu abangevayouthandoukuba sisithulu. Bayazingca ngolwimi lwabo, ngokwenkcubeko yabo, nangokubaluleka kwabo. Abayi kuyithengisa ukuba beve. Kwaye ndicinga ukuba senze umsebenzi omhle kakhulu ekuchazeni loo nto ebantwini kwiminyaka edlulileyo. Ngendlela efanayo, ndafunda malungaabazali abaninzi babantwana abaneDown sIsifo esinyanisekileyo-ayisiyiyo nje ukuba yipc, kodwangokwenene- bhiyozela indlela abantwana babo abalibona ngayo ilizwe. Uluvo lokuba akufuneki sonke sifane luyinguqu entle kakhulu. Ndiyathetha, uninzi lwethu luzabalazela ukuba nohlobo lomzimba olufanayo (‘lube luncipha kangangoko.’) Sijolise ekuphumeleleni njengelizwe. Akukho mntu uxubusha imiceli mngeni malunga nokukhulisa umntwana onesifo seDown kufuneka abe njalo, yonke imihla, kodwa into endiyathemba ukuba ifunyenwe yile yokuba umahluko kwihlabathi ulungile.
Perry: Xa wazisa imiba yokungeva xa kuvulwa umboniso, isiqendu soku-1, uye ngqo kwingxoxo mpikiswano malunga nokufakwa kweCochlear kunye nokulungisa ukungeva. Zininzi iingxoxo ngoku malunga ne-Down syndrome nayo- ngaba ziza kuza?
Mhlophe: Enkosi, ewe. Ngokuqinisekileyo. Hlala ujonge.
Utshintshiwe ekuzalweniumoya kwi-ABC Family kwi-8 EST / 7 CST.
UDavid M. Perry yintatheli ezizimeleyo. Fumana umsebenzi wakhe e lo myalezo.net . Mlandele kwi-Twitter ( @Lollardfish ).
Ingqondo8 yeeyure ezi-2 zokukhutshwa komhla wokugqibela
izivakalisi ngoonobumba abangama-26
Uluhlu lweefilimu ze-bluth
Isigcawu somntu wesigcawu onomdla